Local Crime News Archives - SH - Media
#အသက်၂၁နှစ်အရွယ်ကောင်လေးနဲ့ #အသက်၂၀အရွယ်ကောင်မလေးတို့ #လင်မယားကဓားထောက်ပြီးဆိုင်ကယ် #လုသတဲ့—-
#ဖိနပ်ဖြင့်လိုက်ရိုက်သူကို #ဓားနဲ့ထိုးလိုက်တာ #ပွဲချင်းပီးသေရတဲ့လူသတ်မှု
Home›Crime News›Category: "Local Crime News"
Crime NewsLocal Crime News
======================= ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ရက် ( ၂၀၀၀) အချိန်ခန့်က (ပန်းတောင်း)မြို့နယ် မကြီးထုံးကျေးရွာ (အ.လ.က) ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှ 81 တံဆိပ်ပါ (၁၇)လက်မ ဖလက်ပြား အနက်ရောင်တီဗွီ(၁)လုံး။(တန်ဖိုး ၇၀၀၀ဝိ/-) NHK တံဆိပ်ပါ EVD ...
လင်မယားချင်းစကားများရာမှ ဇနီးဖြစ်သူကဓားနဲ့ထိုးလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေရပြီ ==============+ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အောင်သိဒ္ဓိလမ်း၊နေထိုင်သူ မစန်းစန်းယု(၄၆)သည် (၂၉- ၁, ၂၀၂၁)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်ခန့်တွင် လှော်ကားလမ်းဈေး၊ သံလမ်းထိပ်တွင် ဘုရားပန်းများရောင်းနေစဉ် မောင်ဖြစ်သူပလာတာ(ခ)မောင်ဇော်(ခ) ဇော်ဝင်းနိုင်သည်၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ မ၀င်းဝင်းအေး(ခ)မအေးလေနှင့် လင်မယားချင်း စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးနောက် ...
================================== ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် သန်လျင်မြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းတွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းအား ဓါး ထောက် လုယက်သူ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့အား သက်သေခံပစ္စည်းနှင့်အတူဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဥ်မှာ ဇန်နဝါရီလ(၂၆)ရက် ညနေ(၆)နာရီအချိန်ခန့်တွင်ဦးအေးမင်းထွန်း၊အသက်(၃၄)နှစ်၊(ဘ)ဦးရွှေမြင့်၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ ၊သန်လျင်မြို့နယ်နေသူသည် ဘုရားကုန်းလမ်းဆုံ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဂိတ်တွင် ကယ်ရီဆွဲရန် ခရီးသည်စောင့်ဆိုင်းနေစဥ် ...
ခြောက်နှစ်သမီးလေးကျန်ခဲ့တယ်- သမီးအတွက်အမေဆိုတာ ထာဝရရပ်တည်ပေးရမှာ လောကကိုဘာ့ကြောင့် အရှုံးပေးသွားတာလဲမသိ—? ? ================ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၂၈.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့ ညနေ၄နာရီခွဲအချိန်ခန့်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊တောင်ပိုင်းခရိုင် ၊ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ကမာကလုပ်ရဲစခန်းအပိုင်၊ ကုလားတန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသူရဟန်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဆိပ်သောက် သေဆုံးနေကြောင်းကမာကလုပ်နယ်မြေရဲစခန်းသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားမှုကြောင့် ကမာကလုပ်နယ်မြေရဲစခန်းမှစခန်းမှူး ရဲအုပ်မျိုးကိုကိုနယ်ထိန်းရဲတပ်သား စိုးထက်အောင်တို့မှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာအိမ်မှူးများနှင့်အတူသွားရောက် ...
=================== လက်ပံတန်းမြို့ မအူကုန်းရပ်ကွက် ၁လမ်းအဝိုင်းထိပ် ( )ကွမ်းယာဆိုင်ရှေ့တွင် လူတစ်ဦးဓါးဒဏ်ရာဖြင့်သေဆုံးနေကြောင်း ပြည်သူတစ်ဦးမှမြိုမ့စခန်းသို့ဖုန်းဆက်သဖြင့် ဒုရဲမှူးနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်းများသွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ နိုင်ဝင်းအောင် ခ ဖိုးသား ၂၃ နှစ် ဘ ဦးခင်မောင်မြင့်၊ဘီးလင်းတန်းရပ်ကွက် လက်ပံတန်းမြို့နေသူဖြစ်ကြောင်း ထိုနောက် ...
#၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးငိုယိုနေလို့ #မေးလိုက်တော့မှ—? ?
​==================== (၂၅ .၁. ၂၀၂၁)ရက်နေ့(၀၇၀၀)အချိန် ကွင်းလှအုပ်စု ဖိုးလေးကုန်းကျေးရွာနေ ဒေါ်—-(၅၀နှစ်) သည် သမီးအကြီးဖြစ်သူ မ—-(၂၂)နှစ် နှင့်အတူ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မူ/လွန်စာသင်ကျောင်း၌ ပန်းရံအလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် နေအိမ်မှ ထွက်လာခဲ့ပြီး နေအိမ်တွင် သမီးအငယ်ဖြစ်သူ မ—— (၁၈)နှစ် ...
#၂၁နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးက #စိတ်ကြွဆေးပြားရောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တော့ #အဖမ်းခံရပြီပေါ့
============= တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအုပ် အောင်ဆန်းလင်း ဦးစီး၊ မြိတ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုရဲအုပ် ဇာနည်ထွန်းနှင့်အဖွဲ့ မြိတ်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ဇော်မိုးအောင်နှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့သည် သက်သေများနှင့်အတူ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်းအရ ဇန်နဝါရီ ၂၆ရက် ည ၉နာရီခွဲအချိန်တွင် မြိတ်မြို့၊ ...
#ရွေတူးဖော်တယ်ဆိုတာ နဲနဲပဲတူးတူး များများပဲတူးတူး အသေးစားပဲတူးတူး အကြီးစားပဲတူးတူး #တရားမဝင်ရင်အကုန်ဖမ်းမှာပါ
======================= ဖြစ်စဉ်မှာပျဉ်းမနားမြို့နယ် ၊ဆင်ဖြူတောင်ဘုရားအနောက်ဘက်ငှက် ပျောတောအတွင်းဗြုန်းကျောက်ခွဲစက်များဖြင့် တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေကြောင်း သတင်းအရ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ ၁၃၄၀ အချိန်က ရွာကောက်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့က သွားရောက် ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာ ဝဲကြီးကျေးရွာနေ သိန်းထိုက်(၄၀)နှစ်အား ဗြုန်းကျောက်များကို အမှုန့်ကြိတ်စက်ဖြင့် ...
#မပိုးပိုးနွယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက #ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုနောက်မိန်းမယူလို့ #အမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီ–
နောက်မိန်းမယူချင်တဲ့ ယွကျား(ရွကျား)တွေ သတိထားကြပါ ================ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၂၆.၁.၂၀၂၁ရက် မွန်းလွဲ၂နာရီ၃၅မိနစ်အချိန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်တခါးမြို့နယ် ၊ကျောက်တခါးရဲစခန်း တောင်ဘက်(၁)မိုင်(၄)ဖာလုံခန့်အကွာ ရင်းတိုက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ချောက်တရာကျေးရွာနေမပိုးပိုးနွယ်(၂၈)နှစ်၊ ကျဘမ်းလုပ်သူသည်၄.၄.၂၀၁၇ရက်နေ့တွင် နံဇကျေးရွာအုပ်စု၊ချောင်းဝကျေးရွာနေ ကုလားကြီး(ခ)ဇေယျာမင်း(၂၆)နှစ် ၊လယ်လုပ်သူနှင့်ချောက်တရာကျေးရွာတွင် တစ်ကြိမ်ချောင်းဝကျေးရွာတွင် ၁၀.၄.၂၀၁၇ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်၊ ဗမာဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ တရားဝင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်ကာမပိုးပိုးနွယ်မှ၄င်း၏အတူနေဖခင်ဖြစ်သူဦးတင်စိုး(၅၆)နှစ် ၊ကျဘမ်းလုပ်၊ချောက်တစ်ရာကျေးရွာ၊ ...
#အသက်၂၃နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို #ဖခင်အရင်းကဓားနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ #ဖြစ်ရပ်ကဒီလိုပါ
==================== ဖြစ်စဉ်မှာမှာ ၂၄.၁.၂၀၂၁.ရက်နေ့ ပုသိမ်နယ်မြေရဲစခန်း ၌ ရဲအုပ်ထွန်းထွန်းဝင်း စခန်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန် ပုသိမ်မြို့ ဆေးရုံကြီးက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ အမျိုးတစ်ဦး ဝမ်းဗိုက်တွင် ထိုးသွင်းဒါဏ်ရာ (၁)ချက်ဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူရန်ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်။ သတင်းရရှိသည်နှင့်စခန်းမှူး က နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ...